तपाई इण्डियन आर्मीको रिटायर्ड हुनुहुन्छ ? गम्भीर बिरामी पर्नु भयो भने के गर्नुहुन्छ ? «
तपाई इण्डियन आर्मीको रिटायर्ड हुनुहुन्छ ? गम्भीर बिरामी पर्नु भयो भने के गर्नुहुन्छ ?
प्रकाशित मिति : 12 August, 2019 2:52 pm
चन्दा थापा (चन्द्रिका)
हुन त यस्तो कुरा धेरै भारतीय सेनामा जागिर खाएर पेन्सन निस्कनेका नेपाली दाजुभाइलाई थाहा होला । तर, थाहा छ भनेर चुप लाग्दा धेरै त्यस्ता रिटायर्डहरु जानकारीको अभावमा भौतारिरहनु भएको छ की, भनेर नै यो सन्देश दिन खोजिएको हो ।
सन्दर्भ मेरो कोही आफन्त रिर्टायड भारतीय सेना हुन् । उनी विरामी भएर अस्पताल भर्ना भए । तर, उनी तथा उनको परिवारलाई थाहा थिएन की, रिटार्यडले त्रैमासिक वा ६ महिनामा आफूलाई पायक पर्ने ठाउँमा पुगेर पेन्सन बुझ्ने मात्र नभएर अरु पनि धेरै सुविधा पाउछन् भनेर । हो त्यस्तै भयो मेरा आफन्तलाई पनि ।
केहि समय अगाडिको कुरा हो । झापामा रहेका मेरा आफन्त सिकिस्त विरामी भए । उनलाई उपचारका लागि काठमाण्डौंको एक नाम चलेको अस्पतालमा भर्ना गरियो । गम्भीर विरामी भएका कारण ठूलो खर्च पनि लाग्यो । उनले पेन्सन बुझेर बैंकमा राखेको केही रकम उत्तिखेरै सकियो । त्यसपछि अन्य नागरिकको जस्तै उनको पनि दैनिकी बन्यो । गाउँबाट दुःख सुख गर्दै पैसा मगाउँदै औषधि उपचार गरियो । कहिले छोराले पठाए, कहिले छिमेकीले सहयोग गरे, कहिले दाजुभाइले गरे । तर, एकदिन कसैले भन्यो कि, एक्स आर्मीहरुको लागि उपचार पनि फ्री हुन्छ । त्यसपछि उनका आफन्त ECHS ( Ex-Serviceman Contributory Health Scheme) कार्ड उक्त कार्ड लिएर काठमाण्डौंस्थित पेन्सन क्याम्पमा पुगे । त्यहाँ पुगेर सोध्दा विरामी भएर इमरजेन्सीमा पुग्दासाथ सायद १२ घण्टाभित्र होला, त्यहाँ फोन गरेर ‘मेरो यस्तो विरामी, यो–यो नामको रिटायर्ड आर्मी नम्बर यति यतिको फलाना अस्पतालमा भर्ना गरेका छौं,’ भनेर परिवारले तुरुन्त सम्बन्धीत निकायमा फोन गर्नुपर्दो रहेछ । तर, मेरा आफन्तको परिवारले ढिला गरेको कारण त्यो गुम्ने अवस्था देखियो ।
त्यतिबेला जीवनमा एउटा पाठ सिकियो र सबैलाई सेयर गर्न मन लाग्यो । यदि तपाई पनि रिटायर्ड आर्मी हुनुहन्छ र अकस्मात गम्भीर विरामी पर्नु भयो भने जुन ठाउँबाट तपाईले पेन्सन रकम बुझ्नुहुन्छ त्यहाँको फोन नंमा फोन गरेर आफू भर्ना भएको अस्पतालको नाम र आफ्नो कार्ड तथा नम्बर टिपाई हाल्नुहोला । त्यत्ति भएमा तपाईले उपचार गर्दा आफ्नै पैसा खर्च गरेपनि अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुँदा उपचारको सबै रेर्कड, तपाईलाई हेरेको डाक्टरको सिग्नेचर, र तपाईको पेन्सनको चेक, उपचार गरेको ओर्जिनल डकुमेन्ट, तपाईको कार्डको फोटो कपी लिएर आफूले पेन्सन बुझ्ने ठाउँमा लगेर बिल पेश गर्नुहोस् । त्यसको केही समयपछि तपाईले खर्च गरेको रकम त्यहाँबाट पाउनहुनेछ ।
यदि त्यो अस्पतालमा उपचार गर्दा बाहिरबाट औषधि ल्याउनु परेमा पेन्सन क्याम्पबाट दिएको एउटा कागजमा औषधिको नाम, मिति र जहाँबाट औषधि लिनुहुन्छ त्यो क्लिनिक वा फार्मेसीको छाप लगाइदिन नभुल्नुहोला । त्यसको पनि एकमुष्ट पैसा लिन सकिने सुविधा रहेछ । यदि उक्त अस्पतालमा विरामीलाई १२ दिनभन्दा बढी राख्नु पर्यो भने पनि पुन : सोहि ठाउँमा गएर अर्को प्रोसेस गर्नुपर्दो रहेछ ।
मेरोलागि नितान्त नौलो र ठूलो कुरा लागेको भएर केही सेयर गर्न खोजेकी मात्र हुँ । यो भन्दा बढी कोही साथी जानकार हुनुहुन्छ भने सिलसिलेवर यसमा थप्दै जान सक्नुहुन्छ ।
मेरोलागि नितान्त नौलो र ठूलो कुरा लागेको भएर केही सेयर गर्न खोजेकी मात्र हुँ । यो भन्दा बढी कोही साथी जानकार हुनुहुन्छ भने सिलसिलेवर यसमा थप्दै जान सक्नुहुन्छ ।-ससारन्युजबाट
प्रधानमन्त्री ओली इतिहासका क’लं’क हुन : प्रचण्ड
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सार्वभौमिक जनाताको विरुद्ध त’रबार उठाएर केपी
काठमाडौंमा केश मु’ण्डनसहित वि’रोध प्रद’र्शन
संविधान बि’परित संसद बिघ’टन गरिएको भन्दै नेविसंघका कार्यकताले केश मु’ण्डन गरेर वि’रोध प्रद’र्शन गरेका छन्
ओली र प्रचण्ड–नेपाल दुई पक्षका विभाजित भएसँगै नेकपा निकट प्रेस संगठनमा पनि विभा’जन
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दुई पक्षमा बिभाजन भएपछि यसको प्रभाव पत्रकारहरुको संस्था प्रेस संगठनमा पनि
विश्व कप २०२२ को छनोट अखिल नेपाल फुटवलसंघ एन्फाले गर्ने
विश्व कप २०२२ को छनोट लगायत विभिन्न प्रतियोगिता अखिल नेपाल फुटवलसंघ एन्फाले सञ्चालन गर्ने निर्णय
कृषिमा वैदेशिक लगानी आवश्यक छ : श्रीराम घिमिरे
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीराम घिमिरेले कृषिमा वैदेशिक लगानी आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ